Atao ahoana ny fiainana efa simba?
"(Hoy Jesosy:) Mankanesa at? amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana."Matio 11:28
Vinavinaina ho 2500 isan-taona, any Frantsa, ireo olona misafidy ny handao ny zavatra rehetra mba hanorina fiainana vaovao. Aleon’izy ireny mandao tampoka izay rehetra nandrafitra ny fiainany teo aloha, ka manjavona, ary raha azo atao dia tsy fantatra hoe nankaiza, mba hanjary olona hafa tanteraka, tsy voatery hitantara ny lasany.
Mety hanontany tena isika hoe nahoana no misy olona maro toy izany, misafidy io fomba io mba handosirany ny fiainany ankehitriny. Tsy voatery akory hoe handositra mba tsy hiharan’ny vokatry ny hadisoana natao na olana lehibe ara-bola. Angamba izy ireo te handositra fotsiny ny henatra sy ny fahadisoam-panantenana, na koa te hampisy dikany ny fiainany?
Misy anefa fomba hafa ahazoana fiainam-baovao indray. Anio Jesosy Kristy dia mbola miteny amin’ny olona rehetra hoe: “Tsy maintsy hateraka indray ianareo” (Jaona 3:7). Io fahateraham-baovao io dia tanterahin’Andriamanitra ao am-pon’ireo rehetra miaiky fa mpanota ary mitoky amin’i Jesosy Kristy, maty sy nitsangana tamin’ny maty. Fiaingana vaovao io, tsy manova ny manodidina na ny toe-javatra ivelany, fa manova ifotony mihitsy izay miaina izany.
Azo ateraka indray ianao,
Afaka mamerina ny zava-drehetra,
Mamafa ny fiainanao lasa
Ary manomboka fiainana vaovao
Miaraka amin’i Jesosy ho Mpiandry anao.